I-Semalt ichaza indlela yokuvikela ikhompyutha yakho kusuka ku-Virus, Worms, neZombies
Izinkampani eziningi ezinamasayithi e-e-commerce aphumelelayo zihlupheka ngokulahlekelwa okukhulu uma zihlaselwa isibonelo isibonelo se-zombie virus. Ama-viruses azinhlelo ezinonya zekhompyutha, ezenza imisebenzi eminingi engadingeki kumakhompuyutha wesisulu. Njengokuqhaqhazela, lezi zombie zihlasela ukukhubazeka kwesistimu. Ama-virus angase athambekele ekudambiseni ukwethembeka komdayisi wesofthiwe. Izihloko eziningi ze-software ezihlaselwa yi-zombie virus zinegama elibi. I-Search Engine Optimization (SEO) yewebhusayithi ingahluleka uma igciwane le-zombie lihlasela isiphakeli. UJason Adler, umphathi we-8 (Semalt uMphathi Wezokuphumelela Kwamakhasimende, uthi ukuvikela ikhompyutha yakho ngokuhlaselwa kwegciwane kungalondoloza ukuphepha kwamakhasimende asebenzisa isayithi lakho.
Ekuqaleni, ama-virus asakaza ngokuhlanganyela kwesofthiwe. Ezinye izikripthi zizokwenza amakhophi wazo futhi zihambise kumakhompuyutha wesisulu. Ngokufanayo, lezi zincwadi zizokwenza amanye amaTrojans kanye nokuhlaselwa kwama-virus amaningi. Ngokugcina isitoreji sediski esidala esikhiphekayo, abaduni bayodlulisa la ma-virus kumakhompuyutha wesisulu. Lezi virus ze-zombie zizobe zanda emshinini wempi. Lapho kufika i-intanethi, ukusabalalisa ama-virus we-computer kwaba lula njenge-ABC. Ngakho-ke izinkampani eziningi nezinkampani ezisebenza nge-e-commerce website zibhekene nokuhlaselwa kwezifo ezifana ne-virus ye-zombie.
Ama-Virus ensimini yezohwebo
Kwezinye izimo, amasayithi ahlangabezana nokuhlaselwa kokuhlaselwa okufana nokuhlaselwa kwe-Denial of Service kumaseva abo. Ukuhlaselwa okunjalo kufaka uchungechunge lwamabhodlela enza izenzo eziningi ezinonya..Ama-Botnets amakhompyutha we-zombie aneklamo ethile efaka isici sokuxuba abantu. Ngenxa yalokho, iseva ibona ukuvakashelwa kwewebhu njengezimoto ezisemthethweni. Kukhona nezinye izindlela abantu abazisebenzisayo ukwenza amawebhusayithi abo afinyelele phezulu kuma-SERP. Ama-Botnets angenza ukuthi lezo zindlela zokumaketha zedijithali zenzeke futhi zenze inkampani ilahlekelwe. Isibonelo, ekuhlaselweni kwe-DDoS, abahlaseli bathatha izigidi zebhodi kwiseva okwenza kungakwazi ukuphatha ithrafikhi.
Ama-virus esiteshini somphakathi
Kwezinye izimo, izisulu zihlangana nokuhlaselwa okunonya okwenza okuqukethwe kube yi-viral. Amagciwane ayingxenye ebalulekile yomphakathi njengoba ezinye izinkampani zisasebenzisa ukwenza imisebenzi yazo. Kwezinye izimo, abakwa-webmasters kanye nochwepheshe bekhompyutha bakhuthaza abasebenzisi ukufaka izinhlelo ezikhethekile ezifana nesofthiwe ye-antivirus. Le software isisiza ukususa izici eziningi zokuthuthukiswa kwewebhu. Zisiza futhi amakhompiyutha ahlale ephephile kwezinye zalezi zihlaselo. Abaqaphi bangase bajobe amagciwane kumaseva noma amafu amakhompyutha amaningi. Bangenza amawebhusayithi asebenze ngaphansi kwemibandela yolwazi olubalulekile oluvuzayo.
Wonke amabhizinisi e-commerce kumele asebenze ngaphansi kwezinyathelo ezithile zokuphepha. Kunezinhlobo eziningi zokukhubazeka ezizungezile amakhompyutha namaseva. Idatha ingakwazi ukuvuza nganoma yisiphi isigaba sokusingatha kwayo. Izinkampani ezinkulu zitshala imali eningi ekwenzeni isofthiwe yokulwa ne-spyware yangokwezifiso. Kwezinye izimo, abantu bakhokhela izinhlelo ze-antivirus ukuthuthukisa lokhu kuvikeleka. Noma kunjalo, amagciwane ayaba nzima nakakhulu. Nsuku zonke, abaduni kanye nabanye ochwepheshe bahlakulela ukuxhaphaza okuyekethisa ukuphepha kokusebenzisa iwebhusayithi. Kunamathuluzi amaningi wamahhala abantu abaningi abangawafinyelela futhi basebenzise ngokumelene nalaba bantu. Ungasebenzisa lesi siqondiso ekuvikeleni amakhompyutha kusuka kuma-virus, ama-worms, nama-zombies Source .